I-Taliban iqhuba i-Islamic Emirates yase-Afghanistan iyawathanda amaTyhini kunye noXolelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-Taliban iqhuba i-Islamic Emirates yase-Afghanistan iyawathanda amaTyhini kunye noXolelo
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ingqungquthela yeendaba yaseTaliban
Ibali lokwenyani liyavela.
Umlawuli we-Tadban 'Taliban uthatha iintlanganiso eKabul, eqinisekisa ngokhuseleko koogqirha, koosomashishini.
Isithethi seTaliban sikwathi kwinkomfa noonondaba, urhulumente wakhe omtsha uza kuqinisekisa amalungelo abasetyhini phantsi 'kwemida yamaSilamsi' kulandela ukubanjwa kwe-Afghanistan.
I-Taliban ibhengeze uxolelo ngokubanzi kuwo onke amagosa aseburhulumenteni e-Afghanistan kwaye bacele ukuba babuyele emsebenzini.
Umnxeba uza kwisithuba esingaphantsi kweentsuku ezimbini emva kokuba abalwi beTaliban bangene kwiNdlu kaMongameli kwaye babhengeza imfazwe e-Afghanistan.
AmaTaliban axelwe ukuba asathetha-thethana ngokusesikweni malunga neenkokheli zopolitiko zelizwe.
Wamkelekile kuTaliban onobuhlobo olawula i-Emirate entsha yamaSilamsi e-Afghanistan!
Ngeli xesha, u-Enamullah Samangani, olilungu lekomishini yenkcubeko eTaliban, uthe abafazi mabazibandakanye norhulumente wabo omtsha. Ukwabize "onke amacala" ukuba ajoyine urhulumente omtsha.
Kwangelo xesha, iivenkile eziseKabul ezithengisa i-burqas zaziqhuba ishishini ngokukhawuleza kwaye bambalwa abantu basetyhini ababonwayo kwizitrato zaseKabul ngoLwesibini, ngokweengxelo.
Ngexesha lentlanganiso ye-UN Security Council ngoMvulo malunga nengxaki e-Afghanistan, uMmeli we-UN welizwe u-Ghulam Isaczai uthe abahlali base Kabul baxele ukuba amalungu e-Taliban aqalile ukwenza uphando kwindlu ngendlu efuna abantu abasebenzisana no rhulumente.
Iitaliban Fighters zithatha iKabul
Uye wathi ufumene iingxelo zokubulawa kwabantu ekujoliswe kubo kunye nokuphangwa kwidolophu elikomkhulu
Umongameli wase-US uJoe Biden, kwintetho kamabonakude evela e-East Igumbi le-White House ngoMvulo emva kwemini, uthe "Ndime ngokuthe ngqo kwisigqibo sam" sokukhupha imikhosi yase-US e-Afghanistan kwaye "akazukurhoxa kwisabelo sam apho sikhona namhlanje. ”
U-Biden uvumile ukuba ulawulo lwakhe belungalindelanga ukuwa ngokukhawuleza kukarhulumente phambi kwe Taliban. Ubunkokheli base-US beDemokhrasi buqaphele ukuba isivumelwano sokurhoxa ekuqaleni saxoxwa ngowayesakuba nguMongameli uDonald Trump.
Iintloko ukuya kule ntatheli ye-CNN ikhaliphileyo:
Kwizitrato zaseKabul namhlanje- siziva sibona imbali pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ
-Clarissa Ward (@clarissaward) Agasti 16, 2021
I-tweet ishwankathela uloyiko:
Ngaba uyazi ukuba boyika njani abafazi e-Afghanistan ngoku? Ewe, unokuma kwaye uthathe isithombe kunye nabo. Kodwa abafazi base-Afghan abavumelekanga ukuba basebenze.
ukuba Taliban ukusemthethweni ubukhoboka, udlwengulo, umtshato womntwana (ukuhlukunyezwa), uyakuyamkela loo nto? Yeyiphi imida yakho xa kuziwa ekukhuseleni amalungelo oluntu? Ngaba awucwangcisi ukuma ngokuchasene nabasisiseko kunye neentshaba zobuntu konke konke?
Nge ntlonipho: Imithombo yeendaba
ITywina elitsha le-Islamic Emirates yase-Afghanistan